श्रीदेवीको मृत्यु हुनुअघि अमिताभ वचनले गरेका थिए यस्तो ट्विट, जसले बलिउड नै हल्लायो ! — Sanchar Kendra
श्रीदेवीको मृत्यु हुनुअघि अमिताभ वचनले गरेका थिए यस्तो ट्विट, जसले बलिउड नै हल्लायो !
काठमाडौं । शनिबार राति अबेर बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको निधनको खबर बाहिर आयो। हृदयाघातका कारण उनको निधनको खबर बाहिरिएसँगै अहिले बलिउड दुःखमा छ।
बलिउड स्टारहरू रातिदेखि नै सोसल मिडियामा श्रीदेवीलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन्। यस्तोमा बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनको एउटा ट्विट अहिले सोसल मिडियामा चर्चाको विषय बनेको छ।
के हो कार्डिएक अरेस्ट ? जस्ले चर्चित नायिका श्रीदेवीको ज्यान लियो: हार्टडटओआरजीका अनुसार ‘कार्डिएक अरेस्ट’ अचानक हुन्छ र शरीरले यो हुँदा कुनै अग्रिम चेतावनी दिँदैन । यसको कारण सामान्यतया मुटुमा हुने इलेक्ट्रिकल गडबडी हो, जसले मुटुको धड्कनको तालमेल बिगारिदिन्छ ।
कार्डिएक अरेस्टमा मृत्यु निश्चित छ ?: अमेरिकामा अध्ययनरत सिनियर डाक्टर सौरभ बंशलले बीबीसी हिन्दीलाई भने, “कार्डिएक अरेस्ट हरेकलाई मृत्युको अन्तिम बिन्दु भन्न सकिन्छ । यसको मतलब हो, मुटुको धड्कन बन्द हुनु र यही मृत्युको कारण पनि हो ।’’
कार्डिएक अरेस्टका कैयौं कारण हुन सक्ने भए पनि मुटुसँग जोडिएका केही बिरामीहरुका कारण यसको सम्भावना बढी रहन्छ । के कार्डिएक अरेस्टबाट बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ ?